Naanị m si na mmekọrịta ogologo oge pụta. Gịnị bụ Iwu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? - Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ
Naanị m si na mmekọrịta ogologo oge pụta. Gịnị bụ Iwu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Apụsịrị m na mmekọrịta dịtere aka wee banye na mkpakọrịta nwoke na nwanyị-n'ụzọ nkịtị! Ugbu a, m na -ahụ mmadụ atọ dị iche iche, ihe m na -emebeghị mbụ, na -achọ ndụmọdụ maka otu esi edozi ya.
Ekwesịrị inwe oge nchere n'etiti ndị mmekọ? Enwere m ike isoro mmadụ abụọ dị iche nwee mmekọahụ n'ime otu izu (yana nchekwa, n'ezie)? Ọ bụrụ na anyị ejiri ihe eji egwuri egwu mmekọahụ m, enwere m ike iji ya na ọtụtụ ụmụ nwoke? Ọzọkwa, kedu ụkpụrụ dị n'ịgwa mmadụ na abụghị m otu nwanyị n'ụzọ na -agaghị emerụ ha ahụ? Achọrọ m ka m lụọ di ma ọ bụ nwunye ruo nwa oge, mana ihe niile dị mgbagwoju anya!
A ga -enwe ekele maka ndụmọdụ ọ bụla,
Ọ masịrị m na ị bịara ajụjụ dị mkpa. Site na ngwa ngwa njikọ dị iche iche anyị nwere taa, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nkịtị abụrụla ụkpụrụ ọhụrụ. Na nke ahụ abụghị ihe ọjọọ! Ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu na -eme ka nhọrọ ha ghe oghe ka ha na -achọpụta ihe ha chọrọ, nke na -agụnye mgbe ụfọdụ iso ọtụtụ ndị mmekọ na -ehi ụra n'otu oge. Agbanyeghị, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na -eme enyi ụbọchị adịghị enwe mkparịta ụka n'eziokwu banyere ya - ọ bụ ya mere obi ji dị m ụtọ na ị nwere obi ike iwepụta nke a.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe zuru oke ịkpa mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ọ dị mkpa icheta na mkpakọrịta nwoke na nwanyị nkịtị ekwesịghị ịdị ka ihe merenụ Bachelor . Ị naghị agbado azụ azụ azụ wee mebie ohere gị na olile anya ịchọta nke ahụ.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike ịbụ usoro mmụta dị egwu ma nwee ike inyere gị aka ịchọpụta kpọmkwem ihe ịchọrọ na mkpa na mmekọrịta. Ihe ndị mmadụ chọrọ maka mmekọrịta ogologo oge na-agbanwe agbanwe oge niile, naanị ụzọ iji chọpụta ihe na-arụrụ gị ọrụ n'ezie bụ ịpụ ebe ahụ wee nwalee mmiri.
N'ikwu nke a, a na m aghọta na ụkpụrụ nke ịgwa onye mmekọ na ị bụghị otu nwanyị abụghị ihe ama ama. N'eziokwu, ọ nwere ike ịdị gị ka mkparịta ụka na -adịghị mma ị ga -enwe (ọkachasị ma ọ bụrụ na ị chere obere oge iwepụta ya) mana ọ ka mma karịa ime ka mkpakọrịta nwoke na nwanyị gị bụrụ nnukwu enyí na -adịghị mma n'ime ụlọ.
Ihe kacha mma ị ga -eme bụ naanị ka gị na onye ọlụlụ ọhụrụ mara ihe. Ịkwesighi ịwụfu nkọwa niile na -atọ ụtọ; ọ dịghị ha mkpa ịma ọnọdụ mmekọahụ ị nwara nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ na-ekpo oke ọkụ ihe na-erughị awa 24 gara aga, mana ị kwesịrị ime ka ha mara na ị na-ahụ ọtụtụ mmadụ ma chọọ idobe ihe nkịtị. Ọtụtụ mmadụ ga -adị mma na ya, mana ọ bụrụ na onye gị na ya na -anọghị, kedu ihe ọ bụ? Dị ka saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ọtụtụ azụ dị n'oké osimiri.
N'ihe gbasara ịkekọrịta ihe egwuregwu ụmụaka na -aga — a sị m, gịnị kpatara ya? Echere m, ị na -azụta ihe egwuregwu ụmụaka $ 100, kedu ka ị gaghị esi kesaa ya? Mana aghọtara m ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmekọ nwere ike na -eche na ha amaghị ebe ebe ihe egwuregwu ụmụaka a dị, ma ọ bụ onye ya na ya na -egwu egwu.
Kama ị kpachara anya na ifufe wee mebie ime Anwansi Wand gị, soro onye gị na ya na-emekọ ihe kwurịta ya tupu oge eruo, ma mee nhicha ihe ụmụaka ji egwuri egwu bụrụ ihe kacha mkpa. Amaara m, ị nwere ike ị nweta oge iji hichaa mmiri ịsa ahụ gị mgbe niile, hapụkwa ihe egwuregwu ụmụaka niile ị na -eme. Ngwọta: Chọta onwe gị ngwa na -asachapụrụ gị ya, dị ka UVee. Naanị tinye ihe ụmụaka ji egwuri egwu n'ime igbe ma kwụọ ụgwọ, debe ya ma chekwaa ya ruo mgbe ị dị njikere igwu egwu ọzọ.
Ihe ụmụaka ji egwuri egwu mmekọahụ na -abụbu nnukwu ibu, mana imirikiti ndị mmadụ taa na -eche na ụmụ nwanyị na -eji ihe ụmụaka egwuri egwu - ọtụtụ n'ime ha enweghị ike ịnwale ịnwale ngwaọrụ ọhụrụ. Ugbu a, ọ ga-abụ ntakịrị ihe ijuanya ma ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ onye gị na ha na-eme ihe, wee chụpụ oke bekee enyi nwanyị mbụ ha, mana nke ahụ bụ mkparịta ụka maka oge dị iche.
Banyere ma ị nwere ike iso mmadụ abụọ dị iche nwee mmekọahụ ma ọ bụ na ị gaghị enwe n'izu, ọ dị gị n'aka kpamkpam. Mmekọrịta ole ka ọ na -adị gị ka gị na ha dina n'otu oge? Ọ bụrụ na gị na mmadụ na -ehi ụra n'ụtụtụ na onye ọzọ n'abalị ahụ, ma ị jujughị oke agụụ mmekọahụ, mgbe ahụ ị ga -ama na ọ bụghị maka gị.
Ihe kachasị mkpa bụ ka ị na -enyocha onwe gị. Ọ bụrụ na ọ naghị adị gị mma, emela ya. Na mgbe ọ na -abịakwute ndị gị na ha na -eme mkpakọrịta - ọkachasị ndị masịrị gị n'ezie - na -esokwa ha. Ụfọdụ nwere ike ịdị mma na idobe ya na mbụ, mana hey, mmetụta na -agbanwe.
Isi okwu bụ nke a: Enweghị ndị uwe ojii nwoke na nwanyị ga -abata ma mechie gị maka imebi iwu gbasara mmekọahụ. Ị bụ nwanyị, ị nwekwara ike ịme iwu nke gị. Echekwala na ọ dị gị ka ị rịọ mgbaghara: Nwee mkpebi gị ịkpa na -enweghị isi. Site na nkwurịta okwu n'ezoghị ọnụ, ihe ọ bụla ga -ekwe omume.
Emily Morse bụ dọkịta nke mmekọ nwoke na nwoke na onye ọbịa nke pọdkastị iTunes kachasị elu Mmekọahụ na Emily . Dị ka ọkachamara, onye edemede, na kpakpando nke mmemme telivishọn na redio, ọ kpaliri ọtụtụ nde ndị na -ege ntị na ndị na -eso ụzọ ka mmekọahụ bụrụ ihe kacha mkpa, kwalite nkwurịta okwu, na iwusi mmekọrịta ha ike. Iji mụtakwuo ma ọ bụ denye aha na pọdkastị ya, gaa sexwithemily.com .
Ime Ụlọ Na-Eto Eto
kinky ihe ime nwanyi m
gịnị mere e ji debe britney n'okpuru nchekwa
ezigbo jeans na -agbatị agbatị